Fitokonan’ilay dokotera Nepaley iray tsy hihinan-kanina nahatonga ny fanjakana hihetsika · Global Voices teny Malagasy
Fitokonan'ilay dokotera Nepaley iray tsy hihinan-kanina nahatonga ny fanjakana hihetsika
Voadika ny 16 Desambra 2019 14:58 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny 16 febroary 2014 ny teny anglisy)
Taorian'ny fahazoany antoka fa ho apetraka indray ho sojaben'ny Ivom-pampianarana fitsaboana i Dr. Prakash Sayami taorian'ny fametraham-pialàn'i Dr. Shashi Sharma, dia namarana ny fitokonany tsy hihinan-kanina fanintelony kosa ilay dokotera mpandidy ôrtôpedika (mitsabo ny taolana) Dr. Govinda KC ao Kathmandu. Sary avy amin'i Narayan Maharjan. Copyright Demotix (24/1/2014)
Namarana ny fifadian-kaniny mahafaty(fast-unto-death) faha-efatra ny Dr. Govinda KC tamin'ny 15 Febroary 2014, mpandidy taolana ela nihetezana ao amin'ny Hôpitaly Oniversitera Tribhuvan ao Nepal izay voapetaka anaram-bositra Crusader KC. Nanaporofo indray ny Dr. KC, izay niady ho amin'ny fanafoanana ny fitsabahana ara-politika ao amin'ny Ivom-pampianarana ho dokotera (IOM amin'ny teny Anglisy) ao Nepal fa azo alaina tsy misy fampiasana herisetra ny fandresena.
Namarana ny fitokonany tsy hihinan-kanina fanintelony ity dokotera ity noho io antony io ihany tamin'ny tamin'ny 25 janoary rehefa nanome antoka azy ny manampahefana fa hamaly ny fitakiany, saingy naveriny indray ny fitokonana tamin'ny voalohandohan'ny volana Febroary noho ny fiampangany azy ireo ho ilaozany midanàka tsy manao na inona na inona.
Nangataka izy mba hanendrena sojabe vaovao ao amin'ny Ivom-pampianarana Fitsaboana (IoM) mifototra amin'ny maha za-draharaha, ampitsarahana ny [fanomezan-dalana] ho an'ireo kolejy fitsaboana any amin'ny faritra antanandehibe, fanomezana fizakantena ho an'ny IoM ary fitoriana ny lefitry ny mpiadidy, ny lehiben'ny oniversite any ny mpandraki-draharahan'ny Oniversite Tribhuvan, izay lazainy fa mpanao kolikoly sy ambany taratry ny “mafian'ny fitsaboana”.
Nanome ranom-boankazo azy ireo mpianatra mpitsabo nikarakara ny Dr KC nandritra ny fifadian-kaniny ho famaranany ny fitokonany farany indrindra naharitra valo andro, hoy ny tatitry ny vavahadim-baovao antserasera Onlinekhabar. Nisy ny fifanekena nosoniavina teo amin'ny Dr. KC, ny sekreteran'ny fampianarana ary ny sojabe vaovaon'ny Ivom-pampianarana fitsaboana (IoM) Dr. Rakesh Prasad Srivastav, raha ny filazan'ny The Himalayan Times.
Dr. Sudhamshu KC, manampahaizana momba ny voa, mpikaroka sady mpitety firenena avy ao Kathmandu, nisioka hoe:
Tena faly mahafantatra fa namarana ny fifadian-kanina i Dr. KC. Saingy tokony mbola hovonoina ny pesta [voalavo] ao amin'ny TU [Tribhuvan University]. Hampiasa famonoam-boalavo mahomby anie ny filankevitry ny minisitra vaovao.
Nahazo fanohanana goavana avy amin'ny vahoaka i Dr. KC nandritra ireo fifadian-kaniny miisa efatra: tamin'ny taona 2010, Aogositra 2012, ny janoary 2014 ary ny Febroary 2014.
Nisioka ny iray tamin'ireo mpankafy azy, Manohar, nahavita ny fianarana momba ny siansan'ny fiainana sy ny biôteknolojia hoe:
Ireo milaza fa hihinan-kanina ianao rehefa mianjera io,
Ireo milaza fa hihinan-kanina ianao rehefa maty io,
Tsy hahatsiaro ho reraka i KC
Tsy hihemotra i KC
Azo antoka fa ho may ny lapanao fananana azo avy amin'ny tsy rariny
Tsy ho may mandrakizay ny nofinofin'i KC.
Bilaogy malaza Nepaley Mysansar [ne] nanoratra momba ny herim-pon'ny dokotera, milaza ny resaka voalohany indrindra momba azy narakitr'ilay mpanora- gazety Surendra Paudel ao amin'ny Nagarik Daily, izay nitantara an'i KC hatrany hatrany:
17 taona izao, nangorona ny entany niaraka tamin'ny fanafody izy ary nankany amin'ny tanàna lavitra any Nepal, indro isan-taona farafahakeliny. Nankany an-tendrombohitra, havoana ary terai izy mba hanompo ireo mpiray tanindrazana aminy maimaim-poana. Nanompo ireo distrika 72 sahirana tamin'ireo distrika 75 ao Nepal izy. Ary mbola mitohy ny lalany.
Tsy ny Nepaley ihany no notompoiny fa nanampy nanome tanana ireo niangana tamin'ireo loza voajanahary goavana izy. Tany Bangladesh izy taorian'ny rivo-doza nandravarava tamin'ny taona 1993, tany Gujarat tany India izy taorian'ny horohorontany goavana, tany Pakistan taorian'ny horohorontany tamin'ny taona 2005, nankany Myanmar tamin'ny taona 2008 taorian'ny rivo-doza, ary nankany Haiti taorian'ny horohorontany mahatsiravina tamin'ny taona 2010. Nandany herinandro maromaro tany amin'ireo firenena ireo izy nitsabo ireo sisa niangana.
Rehefa mitsabo, mizara fanafody izy, dia tsy mandray vola. Tsy mandray fanomezana avy amin'ny fikambanana izy. Ny volany manokana azony tamin'ny hatsebohany no nolaniany tamin'ny fitsaboana ireo mila izany.
Pikantsary tao amin'ny pejy Facebook “Vonjeo IOM, Vonjeo Dr. Govinda K C”
Niresaka tantara fohy tao amin'ny bilaoginy i Dipak Bhattarai ary nozarain'i Paudel tao amin'ny Facebook:
Raha vao avy nametra-pialàna tsy ho praiminisitra, dia nanasa an'i Dr KC mba hijery ny fahasalamany ny Maoista faratampony Prachanda na i Pushpa Kamal Dahal. Nolavin'i Dr KC ny fangatahana ary nilaza izy fa tsy mbola nankany amin'ny trano fonenan'ny olona mihitsy izy mba hizaha fahasalamana noho ny fandaharam-potoanany fenobe amin'ny fitsaboana ny mahantra sy ny sahirana any amin'ny hôpitaly. Tsy maintsy manaja ny fitsipik'i Dr kC ilay mpitondra hafatra. Tsy maintsy manaja ny fitsipika ihany koa izy. Tsy maintsy mankany amin'ny hôpitaly i Prachanda ary milahatra raha hozaham-pahasalamana. Ary tsy maintsy manajanona ireo mpiambina azy, araka ny voalazan'ny dokotera KC, telo tamin'izy ireo ihany no tonga tany amin'ny hôpitaly.
Raha Nepaley maro no nanohana ny fitokonany, tezitra tamin'ny fifadian-kaniny faha-efatra kosa ny sasany.
Jigyasu Mahesh nisioka hoe::
Manamafy ny politika ny fomban'i Dr KC tsy hamela hiasa. Mandrava ny rafitra [izy ireo]
Ramen Adhikari nanoratra hoe.
Tsy nahita fanohanana avy amin'ireo manam-pahaizana tamin'ny hetsika nataon'i Dr KC aho. Tsy mahita an'i Dr Upendra Devkota tamin'ny lalany? Aiza izy izao?
Novalian'i Milan Bagale hoe:
Antenaina fa ho resy amin'ny ady ny mafia. Avy amin'ny lalina indrindra ato am-poko. Ho antsika ny fandresena.
Satria namarana ny fifadian-kanina ny Dr KC, manantena ny firahalahian'ny fitsaboana fa hanamarika ny fiafaran'ny fitsipiky ny mafia amin'ny fitsaboana sy ny fitsabahana ara-politika ao amin'ny IoM ao Nepal izany.